Lorcaserin - Orinasa mpamatsy mpanamboatra
CMOAPI dia manana karazana akora feno lorcaserin, ary manana rafitra fitantanana kalitao tanteraka.
Mampiseho ny valin'ny 1-3 amin'ny 6
COA of Lorcaserin
COA of (R)Lorcaserin hydrochloride
COA of Lorcaserin(616202-92-7)
Ahoana no fomba handraisako belviq ho an'ny vokatra tsara indrindra?
Atelina manontolo ilay takelaka misy famoahana efa ela, ary aza potehina, tsy hitsako, na hanorotoro azy. Azonao atao ny mandray Belviq miaraka na tsy misy sakafo. Tokony hamoy farafahakeliny 5% amin'ny lanjanao manomboka mandritra ny 12 herinandro voalohany amin'ny fandraisana Belviq sy fihinanana sakafo ambany kaloria.
Ohatrinona ny lanjanao afaka very amin'ny belviq?
Lorcaserin, ampiasaina miaraka amin'ny sakafo sy fanatanjahan-tena, dia miteraka fihenan-danja maivana eo amin'ny 12.9 lb (5.8 kg) raha oharina amin'ny 5.6 lb (2.5 kg) miaraka amin'ny placebo.
Mandra-pahoviana no tokony handraisanao belviq?
Azonao atao ny mandray Belviq miaraka na tsy misy sakafo. Tokony hamoy farafahakeliny 5% amin'ny lanjanao manomboka mandritra ny 12 herinandro voalohany amin'ny fandraisana Belviq sy fihinanana sakafo ambany kaloria. Antsoy ny dokoteranao raha tsy very 5% farafaharatsiny amin'ny lanjanao manomboka aorian'ny fihinanana fanafody mandritra ny 12 herinandro.
Ahoana ny fahatsapanao ny belviq?
Belviq dia fantatra amin'ny agonist mpandray serotonin 2C mifantina, izay midika fa mampihetsika ny ampahany tena voafaritra ao amin'ny atidohanao izay mahatonga anao hahatsiaro ho feno. Ny mosary kely kokoa dia mitarika amin'ny fihinanana kely kokoa, izay miteraka fihenan'ny lanja.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny lorcaserin?
Ny voka-dratsin'ny Belviq dia misy: siramamy ambany (hypoglycemia), olana ara-tsaina, fitempon'ny fo miadana, aretin'andoha, fanina, fahamendrehana, fahatsapana havizanana, havizanana,
Afaka misotro toaka ve ianao rehefa misotro belviq?
Mifandray amin'ny alikaola ve ny zava-mahadomelina rehetra? Tsy ny zava-mahadomelina rehetra mampihena ny lanjany dia misy fifandraisany zava-mahadomelina amin'ny alikaola; ohatra, lorcaserin (Belviq, Belviq XR) sy orlistat (Alli, Xenical) dia tsy mitanisa ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina alikaola amin'ny marika momba ny vokatra.
Mety hiteraka fihenan-danja ve ny belviq?
Valiny manify. Ny olona mihinana zava-mahadomelina mandritra ny herintaona dia afaka manantena ny hamoy ny 3 ka hatramin'ny 3.7 isan-jaton'ny lanjany fotsiny, ary mety hahazo ny lanjany, hoy ny fikarohana. Tao anatin'ny fitsapana iray, ny marary naka an'i Belviq dia very hatramin'ny 5 isan-jaton'ny lanjan'ny vatany taorian'ny 12 volana, fa nahazo 25 isan-jato indray tamin'ny faran'ny taona faharoa.
Iza no tsara kokoa Contrave na belviq?
Belviq sy Contrave dia isan-karazany amin'ny sokajy fanafody. Belviq dia agonista mpandray serotonin 2C ary Contrave dia fitambaran'ny antagonista opioid sy antidepressant.
Tena miasa ve ny belviq?
Ny olona mihinana zava-mahadomelina mandritra ny herintaona dia afaka manantena ny hamoy ny 3 ka hatramin'ny 3.7 isan-jaton'ny lanjany fotsiny
Mitovy amin'ny Phentermine ve ny belviq?
Belviq (lorcaserin hydrochloride) sy Adipex-P (phentermine) dia ampiasaina amin'ny fitantanana lanja amin'ny marary be loatra ankoatry ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena. Belviq dia ampiasaina amin'ny fitantanana lanjany maharitra.
Tapitra ve ny belviq?
Ny US Food and Drug Administration (FDA) dia nangataka ny fanentanan'ilay mpanamboatra Belviq, Belviq XR (lorcaserin) hisintona an-tsitrapo ilay fanafody mampihena lanja amin'ny tsenan'i Etazonia.